ကော့သောင်းမြို့ ၊ ပုလုံးတုံတုံးကျေးရွာတွင် အသက်(၁၄) နှစ်အရွယ် မိန်းခလေးအား သားမယားပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား – မြန်မာ့သတင်း
ရှာမယ်	ရှာမယ်	သတင်းစုံ ကော့သောင်းမြို့ ၊ ပုလုံးတုံတုံးကျေးရွာတွင် အသက်(၁၄) နှစ်အရွယ် မိန်းခလေးအား သားမယားပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား MTD2 weeks agoAdd comment99 views
ကော့သောင်း၊ ဇန်န၀ါရီလ ၆ ရက်
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၊ ကော့သောင်းခရိုင် ၊ ကော့သောင်းမြို့ ပုလုံးတုံတုံးကျေးရွာတွင် အသက်(၁၄)နှစ်အရွယ် မိန်းခလေးတစ်ဦးအား ညီအစ်ကို သုံးဦးမှ အကြိမ်ကြိမ်အလှည့်ကျ သားမယားပြုကျင့်မှု ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဇန်န၀ါရီ လ ၅ ရက်နေ့ က ဖေါ်ထုတ်အရေးယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ပုလုံးတုံးတုံးကျေးရွာ၊ အခန်းတွဲတန်းလျားတွင်နေထိုင်သည့် ဦးကြည်လင်း(အမည်လွဲ) သည် သမီးကြီး မ—–(၁၄)နှစ် နှင့်အတူ ညီအစ်မ(၅)ဦးအား အခန်းတွင်ထားခဲ့ပြီး ဇနီးဖြစ်သူ နှင့် အတူ အဆိုပါနေ့ ညနေပိုင်း၌ ပင်လယ်ပြင်သို့ငါးဖမ်းထွက်ပြီး ညပိုင်း အိမ်ပြန်ရောက်စဉ် ဦးကြည်လင်း(အမည်လွဲ) ၏ အစ်မဖြစ်သူမှ သမီးကြီး မ——– အား အခန်းခြင်းကပ်နေထိုင်သူများဖြစ်သည့် အေးကို ၊ ကိုလတ် နှင့် ဇင်ဇင် ဆိုသူ ညီအစ်ကို သုံးဦး မှ သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ကြကြောင်း အသိပေးသဖြင့် သမီးကြီးဖြစ်သူအား ချော့မော့ မေးမြန်းရာ လွန်ခဲ့သည့် (၃)လခန့်ကတည်းက နှစ်ခန်းတွဲအိမ်သာအတွင်း မ—– မှ အ၀တ်အစားဝင်ရောက်လဲလည်သည့် ညနေပိုင်း အချိန်တိုင်း တဖက်အိမ်သာခန်းမှ ကျော်ခွ တက်ရောက်ကာ ရက်ခြားစီ အဆိုပါ ညီအစ်ကို သုံးဦးမှ အလှည့်ကျ သားမယားအဖြစ် အိမ်သာအတွင်း အကြိမ်ကြိမ်ပြုကျင့် မှုများကျူးလွန်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖေါ်ထုတ်သိရှိရခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်သူ အေးကို ၊ ကိုလတ် နှင့် ဇင်ဇင် တို့အား ကော့သောင်းမြို့မ ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှ (ပ)၂၇/ ၂၀၁၇ ၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၇၆ ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
တနင်္သာရီတိုင်း ပြန်/ဆက် သတင်းများ
မန်းဝိန်းကြီး စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွင် အသက်ကြီးသူအချို့ အာဟာရပြတ်သေဆုံး
သည်လ ၁၅ ရက်နေ့ညနေကစပြီး ရန်ကုန်မြို့မှာ လက်ရှိပြေးဆွဲနေတဲ့ ဘတ်စ်ကား အားလုံးရပ်ဆိုင်းရမယ်လို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ပြော
Add comment	Cancel reply	Comment Name * Email * Website ဒါလေးတွေပါဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ သတင်းစုံ လုပ်ပြန်ပြီ ဒီ ချင်းတွင်း ဖြစ်ပြန်ပြီ ကနီမြို့နယ် ရေယာဉ်၏ ရှေ့ ပိုင်းမှ “တိုက်ပြီ . . . .တိုက်ပြီ ´´ ဆိုတဲ့ အော်သံတွေနှင့်အတူ “ဒုန်း´´ ဟူသောအသံ ကျယ်လောင်စွာ ထွက်ပေါ်လာခြင်းအတူ တုန်ခါပြီး နာကျင်စွာခံစားရတယ် ´´ ခရီးသည်ပြောပြသည့် ဖြစ်စဉ်အနေအထားအရ အသက်ဆုံးရှုံးမှု ကြုံတွေ...
သတင်းစုံ မလေးမှာ အလုပ်ဆင်းပြန်လာတဲ့ မြန်မာလုပ်သား ၁၆ ဦး ဓားဖြင့် ခုတ်ခံရ မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့ ဆာဒန်းမြို့တွင် အချိန်ပို အလုပ်ဆင်းရာမှ ပြန်လာသော မြန်မာလုပ်သား ၁၆ဦးကို မလေးရှားနိုင်ငံသားဟုယူဆရသူ လေးဦးက ဓားဖြင့် ခုတ်ရာ မြန်မာလုပ်သားလေးဦး သေဆုံးပြီး သုံးဦး ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ဇန်နဝါရီ...
သတင်းစုံ Land Dispute Erupts Between Actor Lwin Moe andaKNLA Official A land dispute has risen between the well-known Burmese actor Lwin Moe andamajor with the Karen National Liberation Army (KNLA), an armed ethnic Karen organization. Both parties claim they own more than2acres near the famed Golden Rock in...
သတင်းစုံ တာမွေမြို့နယ် ကျောက်မြောင်းကြီးရပ်ကွက် အင်းဝလမ်းရှိ သွားဆေးခန်း တစ်ခုတွင် ပုပ်ပွ သေဆုံးနေသည့် သွားဆရာဝန်အလောင်း တွေ့ရှိ တာမွေမြို့နယ် ကျောက်မြောင်းကြီးရပ်ကွက် နေအိမ်တစ်အိမ်ရှိ သွားဆေးခန်းတစ်ခုတွင် ပုပ်ပွသေဆုံးနေသည့် သွားဆရာဝန်တစ်ဦး၏ အလောင်းကို ဇန်န၀ါရီ ၅ ရက် ညပိုင်းက တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဇန်န၀ါရီ ၅ ရက် ည ၈ နာရီခန့်တွင် တာမွေမြို့နယ် ကျောက်မြောင်းကြီးရပ်ကွက်...
e-စီးကရက် ရုတ်တရက်ပေါက်ကွဲလို့ သွား(၇)ချောင်း ဆုံးရှုံးပြီး၊ မီးလောင်ဒဏ်ရာ ရခဲ့သူ	11 hours ago6 views
လူသားတံတိုင်းကာထားတာတဲ့ ရက်စက်လိုက်တာ KIA ရယ်	4 days ago205 views
သန်လျင်လိုင်းကား မောင်းသူနှင့်ယာဉ်နောက်လိုက်တို့ ဝိုင်းရိုက်မှုကြောင့် ခရီးသည် တစ်ဦးသေဆုံး	4 days ago66 views
ဆံတော်ရှင် ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော် တောင်ပေါ်ရှိ ရိုးရိုးလေးဟိုတယ် အခန်း (၁၀၆) ခန်း ဖျက်သိမ်းမည့်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောထားထုတ်ပြန်	5 days ago34 views
ဖန်စားပွဲပေါ်မှာ ချစ်တင်းနှောရင်း ဖန်သားကွဲသွားလို့ အပြင်းအထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ ဇိမ်မယ်	5 days ago300 views